YC YL SERIES MOTORS - yareeyayaasha, dixiriga dixirigoodu, gearboxyada dixiriga ah, sanduuqyada meerayaasha meerayaasha, xawaare yareeyayaasha, kala-duwanayaasha, maareynta helical, gearsooyinka bevel sprial, gearboxes-yada beeraha, cagafyada gawaarida, qalabka xamuulka, dirxiga
YC YL silsilado mootooyinka
Bogga ugu weyn / motor / YC YL silsilado mootooyinka
YC taxanaha culus ee hal-wajiga matoorrada ah waxay ku habboon yihiin wadista mashiinnada yaryar iyo matoorrada biyaha, gaar ahaan qoyska ama aqoon isweydaarsiyada halka keliya laga helo koronto hal weji ah. Iswaafajinta "IEC" oo loogu talagalay farsamooyin casri ah lagana sameeyay agabka ugu fiican, matoorrada waxay leeyihiin muuqaal quruxsan iyo waxqabad wanaagsan.
YC matoorrada taxanaha ahi waa kuwa IP44, gebi ahaanba ku lifaaqan oo hawo-qaboojiye ah. Mashiinka wax soosaarka la qiimeeyay ee 3HP iyo ka hooseeya ayaa la bilaabaa awood-yare, marka uu ku shaqeynayo danab la qiimeeyay, oo ka hooseeya 50Hz, wuxuu leeyahay dillaac bilaw ah oo gaaraya 3times codka la qiimeeyay iyo ka hooseeya 60Hz, dhererku wuxuu noqon karaa 2.75 jeer midka la qiimeeyay. Mootooyinka 4HP iyo wixii ka sareeya waa kaabsi bilaw iyo socod. Waxay leeyihiin faa'iidooyinka miisaanka sarreeya, socodka joogtada ah, hoos u dhaca mal-ka, buuqa hoose iyo waxqabadka culeyska badan.
（R / daqiiqo）
DIIWAANKA LAGU QAADAY
注: 表 中 的 电流 值为 额定 电压 ， 为 V V V Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 表 表 Hz Hz Hz Hz
GUUD ＆ DHEERAAD DHEERAAD AH
Cabirka sii kordhaya (mm)
Guud ahaan cabirrada (mm)
NEMA saddex waji-bir ah matoorrada korantada
TYBZ Motors isku dhafan